दुर्गममा निशुल्क औषधि सधैं अभाव – KarnaliPost Daily
दुर्गममा निशुल्क औषधि सधैं अभाव
१७ श्रावण २०७५, बिहीबार ०५:४२ August 3, 2018 by Karnali Post Daily
रेकर्डमा दरबन्दीअनुसार स्टाफ नर्सबाहेकका सबै स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर, सेवामा छैनन् । डा. सुवास शर्मा एक वर्षअघिदेखि खाडाचक्र नगरपालिकामा स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा काजमा छन् । सरकारले बीचमा डा. अमित परियारलाई कुमालगाउँ पठाए पनि उनी ३ महिनाअघि सरुवा मिलाएर गइसकेका छन् । २५ हजार ४ सय ५० जनसंख्या रहेको नरहरिनाथमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको गुनासो छ । खानेपानी, भवन, शौचालयसहित एक्सरे मेसिनको सुविधा भए पनि डाक्टर नहुँदा उपचारका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘औषधि पनि खरिद गरेका छौं,’ अध्यक्ष विष्टले भने ‘डाक्टर नहुँदा समस्या परेको छ ।’
चीनसँग सीमा जोडिएको नाम्खा गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्यचौकीमा लामो समयदेखि औषधि अभाव छ । सरकारी विवरणमा स्वास्थ्यचौकी भए पनि स्वास्थ्यकर्मी कहिल्यै नपुग्ने लिमी तिलका छेवाङदोर्जे लामाले बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मी कहिल्यै जाँदैननन्, औषधि कसरी पुग्नु ?’ उनले भने, ‘उपचार अभावमा स्थानीयले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।’
हुम्लाबाट जयबहादुर रोकाया, कालिकोटबाट तुलाराम पाण्डे र मुगुबाट राजबहादुर शाहीले तयार पारेको रिपोर्ट– कान्तीपुरबाट साभार